10 Zvinhu Zvaunofanira Kuziva NezveR, Python, uye Hadoop | ITS
10 Zvinhu Zvaunofanira Kuziva NezveR, Python, uye Hadoop
Zvikonzero zveCNUMX Zvaunofanira Kudzidza R, Python, uye Hadoop
Information Analytics Domain inoramba ichitisisa zvinotarisirwa paSoftware seSevhisi, kana masangano eSawaS, sezvo isu tichida kuziva. Munhu wose anoda kupindira Big Data uye vane toni yekuzarura kwebasa pamusuo. Zvisinei, kuenderera mberi muDescience Sciences kunokosha kunzwisisa iyo chii uye iyo Data Science Certification inogadzirisa. Iyi ndiyo nzvimbo R, Python uye Hadoop vauye uye pano pane gumi zvinokurudzira zvikuru kuzviziva. Izvi zvinonyanya kuronga mapurogiramu akafanirwa kudzidziswa kuputira mune inyanzvi yezvesayenzi, iyo inosanganisira mazita ekurova akaita seGoogle, Bank of America uye The New York Times.
Accessibility:Ndeupi mumwe mutengi anotarisirwa kuidzidza? R, somuenzaniso, anobvumirwa kuisa uye kumhanya uye izvo zvinopa muchengeti kodzero yekugara uye kuziva nezvayo chero nzvimbo. Python, zvakare zvakare, hazvirevi zvishoma kuti vadzidze uye vamwe vanoti ndiyo yakanyatsojeka yemapurogiramu emitauro. Hadoop, zvakare zvakare, inowanikwa pahutachiona hwemagetsi, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuwana. Zvichienderana neimba yako, mutengi anogona kushandisa chero ipi zvayo. Zviri nyore
Kuvandudza: Sezvo kune ruzivo rwekuongororwa kunotarisirwa, izvi zvitatu zvakasununguka-source programming dialects ndizvo zvakanyanya. Nhau yekutumira kumiririra, MapReduce uye Parallel Processing inogona kunge yakanakisisa yakazadzikiswa navo, sezvinozoitika izvo zvinyorwa zvekutsvakurudza zvinofanira kuve zvichingodzokororwa zvakare, izvo zvakare zvinoshandiswa zvisinganyanyi kudikanwa navo.
Cross Platform: Zvirongwa zvekushandiswa zvinogona kushandiswa pamatanho akasiyana-siyana, akafanana neWindows, Mac OS X, Linux uye zvimwe zvacho zvakanyanya, achibvumira vatengi kuti vapedze basa ravo pane chero gadget. R uye vashandi vePython iye zvino vari kufunga nezvenzira yekugadzirisa hukuru hwemashoko akawandisa pamatanho makuru, uye kutora zviso zveSQL neNoSQL databases.
Unpredictability yakaitwa nyore: Aya matatu emitauro yakarongwa anoshandiswa pakuchengetedza mashoko akawandisa uye akaoma, anonzi Big Data. Kudzokorora kwakanyanya uye kwakaoma kunofanirwa kuve kwakakosha mune zvisiri nyore kuburikidza nekushandisa mazita aya, mumapoka akakura kana ane maitiro akawanda. Pikoni inoparadza ruzivo rwakakosha kupfuura chero r R asi zvose zvakakurukurwa zvakanaka ne Hadoop, kupa vashandi kusarudzwa kunoenderana nezvakasiyana-siyana zvinosarudza kuti ndiani aite.
Accept Acceptability: Nezvakawanda zvakakosha, nharairi dzawedzera kudarika kubhenekera kwepamusoro uye kumativi evanhu vanodarika mamiriyoni e2 vanovashandisa pasi pose pavanenge vachigadzirisa mune svesayenzi. Kubva ikozvino R yakawedzerwa nepamusoro peboka rakakosha naOracle, SAP, Netezza uye Teredata vatanga kusika interfaces dzinoshandiswa R sekutsigirwa nesayenzi.
Kufambira mberi kunonzwisisika: Chero hupi hutsva huri nani hwekugadzirisa zvirongwa zvekuvandudza hunoitika mune imwe yemitauro iyi mitatu sezvo iine yakagadziridzwa uye inogadziriswa. Nekufambira mberi kutsva kwakafanana ff uye bigmemory, ikozvino inofungidzirwa kuchengetedza dheetti dzakakura kudarika chiyeuchidzo. Phythoni inoparadza ruzivo zvakanyanya zvakanyanya kubudirira uye kubvumirana ne Hadoop mubayiro chaiwo.
Zviri nyore Zvokudhinda: Sezvo chirongwa chekuita zvirongwa chinosanganisira zvakanaka nepepanhau rokuparadzira, ivo ndivo vatori vepamusoro. Smooth absorption neLaTeX zvinyorwa zvinoparadzanisa sarudzo uyewo chikamu chekuiswa mukati memashoko ekubata mishumo ndechekuwedzera pane zvishoma. Chimwe nechimwe chezvinyorwa izvi zvine maitiro ezvinyorwa zvehupenyu, zvichiita kuti zvive nyore kugovera uye kubata zvinyorwa zvakawanda zvemashoko.
Nyore kushandisa: R, Hadoop uye Python zvinonzwisisika uye zvinopindira kukohwa kwemashoko kubva kuMicrosoft Excel, Access, MySQL, SQLite uye Oracle, achibvumira chero muchengeti ane chero chigadzirwa kuti ashande pasina chipingamupinyi. Python yakashandiswa zvakanaka kuburikidza neMutauro Wekushandisa Kutsika uye Apache Spark yakaita kuti ruzivo ruwanikwe Hadoop mabhanki anonyatsobudirira.
Kuronga: Kushamwaridzana kwevanhu uye maitiro ekutungamira chikamu chinokosha cheshamwari ipi neipi yenyika yose uye vatengi vanoshingaira vanoramba vachishanda pazvivako kuti vataure pamusoro pemitauro iyi kupfuura chero zvimwewo, vachivimbisa kushandiswa kwemashoko akaenzana kwezvinhu zvakanaka. Anaconda anobva aita kuti ave nemakore akawanda kupfuura 300 kana mamwe mabhomba akaunganidza kuongororwa kwevashandi munyika yose mukukurukurirana kwavo, vachivamera pamatambudziko emangwana.
Kudzokorora Kunyoresa: Kuongorora nekutsvaga hakusi nyore kune aya mazita kunze kwevamwe zvichienderana nekuti matambudziko akawanda ekugadzirisa matambudziko anoshandiswa mukuenderana nemitauro iyi, achibvumira vatengi kugadzirisa zvinhu zvakanakisisa nevanonyanya kukoshesa. Zita rimwe nerimwe rine zvigaro zvaro uye zvingabatsiri asi mumwe anogona kutaura izvozvo R, Python uye Hadoop zvirongwa pamwe chete uye zvinogona kutarisirwa kushandiswa kuchengetedza zvigadziriro zvako zvakachengeteka uye imwe nzira yakanakisisa pane imwe nguva iwe unoda kuenda kuti urongwa hwose hugadziriswe.
Nzira yekurovedza mazano ekutanga
Nzira Yokutanga Kushanda neGata Data & Hadoop Certification Training